I-Site Scraper Service ichazwe ngu-Semalt
Umsebenzi ukukopisha umxholo kwiwebhusayithi yangaphandle kwaye uyisebenzise. I-scrapers yeSayithi imele ibe nemisebenzi efanayo kunye nabaqhubi bewebhu. Zomibini zezi nkqubo zisebenza ukubonisa iiwebhusayithi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-web crawlers inembopheleleko yokumboza yonke i-web, kodwa injongo ephambili ye-scraper ukujolisa kwiiwebhusayithi ezichazwe ngumsebenzisi.
Injongo yeprogram ukujonga umxholo osuka kwenye iwebhusayithi ngenjongo ephambili yokuvelisa ingeniso, ngokuqhelekileyo ngokuthengiswa kwedatha yomsebenzisi kunye nezipapasho - gmail hosting. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba umniki-wesevisi wenkonzo ubeka inkonzo yokubeka iliso kwiwebhusayithi yomsebenzisi ekujoliswe kuyo kwaye uqinisekise ukuba ukusekwa kwesohlwayo rhoqo phantsi kwesondlo.
I-XML, i-CSV, i-HTML
I-scrapers yomhlaba inokulanda nayiphi na ifom yedatha,. Olu buchule luxhomekeke kakhulu kwiinkcukacha zomsebenzisi kunye nenkqubo ngokwayo. Emva kokukhuphela, isofthiwe yilandela ikhonkco kwenye into yangaphandle yokukhuphela. Iproofthiwe inokugcina iifayile zefayile ezilandelwe kwiifom ezahlukeneyo njengeefayile ze HTML, CSV okanye ze-XML. Isixhobo esithandwa kakhulu kwisiza sinekhono elongezelelweyo lokunika umsebenzisi ukuthumela iifayile kwiziko elifanelekileyo.
Le ndlela yinto engekho mthethweni yokuba umxholo wangaphambili kwiwebhusayithi eyaziwayo okanye esemthethweni kwaye uthumele umxholo ofanayo kwenye iwebhusayithi ngaphandle kokufumana iimvume ezifanelekileyo kumnini womxholo. Injongo yodwa kukugqithisa umxholo obiweyo njengomxholo wasezulwini, kunye nokungaphumeleli kokunikezela kumnini.
Ukuhlulwa kwendawo kunemisebenzi emininzi; ezona zixhaphakileyo zikwahlula kunye nokwabiwa kwedatha. Ukongezelela, iququzelela abasebenzisi ukuba bafake idatha echanekileyo esuka kwezinye iiwebhusayithi. Iwebhusayithi eyenziwe yimixholo ecweyo evela kwezinye iiwebhusayithi iyaziwa njenge-27 (scraper site) .
Iziza eziliqela ezihlaziyiweyo zithathwa kuwo wonke umhlaba. Kwixesha elidlulileyo, ezinye iindawo ezicatshulwayo ziye zacelwa ukuba zitshise naziphi na izinto ezikhuselekile, kodwa endaweni yokuzikhupha, ziphela nje okanye zitshintshe izizinda.
Imizekelo yezinto eziqingqiweyo ze-site
IWebhu yeWebhu yehlabathi ihlala ikhula ngobukhulu bayo kunye nobukhulu besedatha, ekhokelela ekufuneni ukuba abathandi beenkcukacha bafune ezinye iiplani zokukhupha idatha evela kwiwebhu. Ukuqhubela phambili kwezobuchwepheshe kuye kwaququzelela ukuphuhliswa kweentlobo ezahlukeneyo zee-scrapers ukufumana idatha kwiwebhusayithi ekhethiweyo.
Kukho iintlobo zezizahlulo zeewebhu ezikhoyo kwinetha namhlanje. Ezinye zezona zixhobo ezihamba phambili ezifumaneka kwiimarike namhlanje zibandakanya iWget, Scraper, i-Extractor Web Content, i-Scrape Goat, i-Web Scraper extension ye-Chrome, Spinn3r, ParseHub, Fminer, njl.
Noko ke, kukho ezinye iindlela ukucoca indawo . Zibandakanya ukudala iinjongo zokukhangela kunye nokubonisa imiboniso kwi-SERPS yomntu, ukubamba iphepha kwi-website kunye nokuyibuyisela kwakhona ukudala i-web directory yomntu, ukufumana inkqubo ye-stock kwiwebhusayithi enye, nokubonisa enye enye.